Warbixin: Macalinka kooxda Barcelona Luis Enrique oo loo sheegay qiimaha uu ku qaadan karo Mauricio Lemos. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Warbixin: Macalinka kooxda Barcelona Luis Enrique oo loo sheegay qiimaha uu ku qaadan karo Mauricio Lemos.
Warbixin: Macalinka kooxda Barcelona Luis Enrique oo loo sheegay qiimaha uu ku qaadan karo Mauricio Lemos.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 9-06-16 1:35 PM Las Palmas ayaa lasoo sheegayaa iney ku wargelisay kooxda Catalans ka ee Barcelona iney bixiso 23 Milyan oo ginni hadii ay doonayaan iney qaataan daafaca Mauricio Lemos xagaagan.
Kooxda uu leyliyo Luis Enrique ayaa lala xiriirinayey mudooyinkii ugu dambeeyey 20 sano jirkan, balse Barca ayaa u muuqata mid aan diyaar u aheyn iney bixiso qiimahaas, waxa ayna diyaar ula yihiin kaliya 9 Milyan oo Ginni sida laga helayo ilo wareedyo ku dhaw dhaw aqalka loogaaga arimiyo kooxda Barcelona.
Wargeyska ugu carabka dheer Gobolka Catalonia El Mundo Deportivo in kooxda Las Palmas ay wado qorshe ay isaga iibineyso daafacan iyada oo dul dhigtay Mauricio madaxiisa aduun lacageed oo gaarayo ilaa 23 Milyan oo ginni.
Ugu dambeyn waxaa xusid mudan in 20 Sano jirkan u dhashay dalka Uruguay uu qaab amaah ah ugu ciyaarayey kooxda reer Spain Qeybtii dambe ee xilli ciyaareedkii 2015/16, balse waxa uu qalinka ugu duugay heshiis joogta ah kooxda Las Palmas bishii aynu kasoo gudubnay.